Long Reach 55ft Telescopic Carbon Fole Pole miaraka amin'ny rafitra fanadiovana avo lenta
Ny tsato-kazo fanadiovana tosidra dia milina iray mahatonga ny rano faneriterena avo vokarin'ny paompy fampidinana tosidra ambony hanasana ny ambonin'ilay zavatra amin'ny alàlan'ny fitaovana elektrika. Izy io dia afaka manala ny loto, manasa, mba hahatratrarana ny tanjona amin'ny fanadiovana ny ambonin'ny zavatra. Satria ny fampiasana tsanganana rano be fanerena hanadiovana ny loto, ny fanadiovana tosidra ambony dia iray ihany koa amin'ny tontolo ekena ho fomba fanadiovana siantifika, toekarena ary sariaka indrindra amin'ny tontolo iainana.
Pole fibre karbaona Telescoping mahazaka tosika avo lenta ho an'ny Garden Garden
12m Heavy Duty Fiberglass Poll Telescopic ho an'ny fanadiovana tosidra avo
3k / 6k / 12k tady telescoping fibre karbaona ho an'ny fanadiovana tosidra ambony amin'ny fantsona
Safidy isan-karazany, raha miantoka ny kalitaon'ny vokatra, mampitombo ny hatsaran'ny bao.
Mora mihetsiketsika ireo bao ireo ary azo mihidy amin'ny halava rehetra, izay mety indrindra amin'ny rindranasa rehetra ilaina ny fitahirizana vodiny sy ny halavan'ny fanitarana lava.